Sergio Ramos oo garoomada ku soo laabanaya. – iftiin fm
Sergio Ramos oo garoomada ku soo laabanaya.
Wadaanka Spain wararka ka soo baxaya ayaa daboolka ka qaaday taariikhda ay Real Madrid u dejisay soo laabashada kabtan Sergio Ramos si uu uga qayb galo kulamada kadib markii uu si buuxda uga soo kabsaday dhaawaca uu haatan kaga maqnaa garoomada.
Xiddiga Ramos ayaa la soo sheegay inuu dib ugu soo laabto safka kooxda Real Madrid labo todobaad ka hor, laakiin ciyaaryahanka ayaa la kulmay dib u dhac cusub oo ku qasbay in qalliin looga sameeyo carjawda jilibka, maqnaanshihiisa ayaa lagu qiyaasay hal iyo bar ilaa laba bilood.
Wargayska ayaa warbixintiisa ku sheegay in Ramos la go’aamiyay xilliga uu ku soo laaban doono safka kooxda Real Madrid taas oo noqon doonta 13-ka bisha soo socota ee Maarso, gaar ahaan kulanka ay kooxda Elche kula ciyaari doonaan horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in haddii qorshaha Real Madrid iyo Ramos aysan ku soo bixin wax layaab leh, inuu qeyb ka noqon doono kulanka lugta labaad ay kula ciyaari doonaan Atalanta wareega 16-ka ee tartanka Champions League, kaasoo la ciyaari doono 16-ka isla bishaas Maarso.
← Wadanka Cumaan oo xayiraad ku soo rogtay 8-dal oo Afrikaan ah.
Kooxda Arsenal oo ka hadashay Hector Bellerin . →